Online Hartha, Author at Online Hartha - Page2of 169
ဂေါက်ရောဂါ၊ အကျိတ်၊အစာအိမ်အနာ၊နှလုံးတို့ ကို ကောင်းမွန်စေသည်ဆိုသော သကြားသီးပင်
October 19, 2020 by Online Hartha
ဂေါက်ရောဂါ၊ အကျိတ်၊အစာအိမ်အနာ၊နှလုံးတို့ ကို ကောင်းမွန်စေသည်ဆိုသော … သကြားသီးပင် သကြားသီးပင် ဒီသကြားသီးဆိုတာက ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့ သကြားသီးမဟုတ်ပါဘူး။ အလေ့ကျပေါက်ပင်လိုမျိုးတွေ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ အသီးနီနီလေးတွေသီးတဲ့ သကြားပင်ရဲ့ အသီးနီနီလေးတွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အသီးလေးတွေက သီးစမှာ အစိမ်းရောင်ဆိုပေမယ့် မှည့်လာတဲ့အခါ အနီရောင် လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ အခွံကခပ်ပျော့ပျော့ရှိပြီး တစ်လုံးလုံးကို စားလို့ရပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက် ဒီအသီးလေးတွေက ဘယ်လိုဆေးဖက်ဝင်လဲ ဆိုတာကိုပြောပြပေးပါရစေ။ ဒီအပင်က ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မက္ကဆီကို မျိုးရင်းပင်တွေပါ။ သကြားသီးနီနီလေးကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တယ် သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပြင်ပကဘက်တီးရီးယားတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင် တိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်။ သကြားသီးမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိနေတာကြောင့် ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့်ဖြစ် တဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေတယ် သကြားသီးက ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအရောင်ကျဆေးတစ်မျိုးလို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ သကြားသီးက အရောင်ကျဆေးတွေနီးပါး … Read more
တဈညနဲ့ တဈမနကျ (၂ )ခှကျသောကျရုံ ရှိသေးတယျ ကြောကျကလြာတဲ့ လကျတှဆေ့ေး
တစ်ညနဲ့ တစ်မနက် (၂ )ခွက်သောက်ရုံ ရှိသေးတယ် ကျောက်ကျလာတဲ့ လက်တွေ့ဆေး ဆန် ဆေးရေ နဲ့ စပါးလင် စိမ်ပြီး သောက် တာ တစ်ညနဲ့ တမနက် ၂ ခွက်သောက်ရုံရှိသေး တယ် ကျောက် ကျလာတယ် ။ အဖေ့ ဆီက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးနည်းဖြန့်ပေးတာပါ ။လက်တွေ့ တစ်ရက်နဲ့တစ်ည အောင့် တာ မခံနိုင် လို့ ဆေးရုံပြတာ ၂.၁ . ၁၈ ရက်နေ့ဆေးရုံမှာ လေဆာနဲ့ချေဖို့ချိန်းထား ပြီးသား ကို မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ညွှနိ လို့ သောက်ကြည့်တာပါ ။ ဆေနည်းညွှန်တဲ့ ကို အသေး လေးလဲ ကျေး ဇူး အရမ်း တင်ပါတယ် ။သူ့မိတ်ဆွေတုန်းက လဲ … Read more
ဆံပငျကြှတျခွငျးမြားအတှကျ အထိရောကျဆုံး ပေါငျးတငျနညျးမြား
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအတွက် ထိရောက်သော ပေါင်းတင်နည်းများ ဆံပင်အရင်းများအားနည်းပြီး ဆံပင်များစွာကျွတ်တတ်ပါက ကြက်ဥ ပါသောခေါင်းလျှော်ရည်ကို အသုံး ပြုရပါလိမ့်မည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ် နိုင်သည့် ဆံပင်ပေါင်းဆေး အချို့ကို မိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ ခေါင်းလျှော်ပြီးပါက ပေါင်းတင်ဆေးကို သုံးပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ (၁)rosemaryရည်ကို ရေနွေး ပူပူထဲတွင် ထည့်၍ မိနစ် (၂၀)ထားပါ။ ထို့နောက် အအေးခံပါ။ ကြက်ဥ(၁)လုံးကိုထည့်ပြီး ဆံပင် အမြစ်အထိရောက်အောင် သုတ် လိမ်းပြီး ခေတ္တထားပြီးမှ ဆေးချပါ။(၂)သင်္ဘောသီး(၁)ခြမ်းကို မိမိ၏ဆံပင်အရှည်၊အတိုအရွယ်ကို ချိန်ပြီး အသားများကိုထုတ်၍ အစေ့ များကို ဖယ်ပါ။ ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ပြီး အနှစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)လုံး စာနှင့်ရော၍ ဆံပင်ကို လိမ်းပြီး နှိပ် နယ်ပေးပါ။ ထို့နောက် မိနစ်(၃၀)ခန့် ထားပြီးမှ ဆေးချပါ။ (၃)ကြက်ဆူဆီ၊ … Read more
“အမြိုးသမီးမြား မီးယပျသှေးဆုံးခွငျးအတှကျ မပငျပနျးသော ဆေးနညျး”
ယောက်ျားတေဇော၊ မိန်းမအာပေါ ဆိုသော တိုင်းရင်းဆေးပညာ၏ ဝေါ်ဟာရရှိ၏။ အမျိုးသားတို့က တေဇောဓာတ်လွန်ကဲတတ်ကြပြီး အမျိုးသမီးတို့က အာပေါဓာတ်နှင့် ပထဝီဓာတ်များ လွန်ကဲလေ့ ရှိသည်ဟုဆို၏။ အမျိုးသမီးတို့သည် မီးယပ်သွေးတည်းဟူသော အာပေါဓာတ် ယိုစီးမှုကြောင့် ရုပ်သဏ္ဍာန် လှပမှုတွင် ရင်နှင့်တင် စသည်ဖြင့် ရုပ်ကိုရှေ့ဆောင်ခြင်းဖြစ်လေသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးသည် မီးယပ်သွေးနှင့် သက်ဆိုင်နေတတ်ပေသည်။ ထိုကြောင့်လည်း …. မီးယပ်သွေးလစဉ်မှန်မှန် ဆင်းသက်စေရန် အမျိုးသမီးများ စောင့်ရှောက်သင့်လှ၏။ အမျိုးသမီးများသည် အဓိကအားဖြင့် မီးယပ်သွေး မမှန်ခြင်းမှ စကာ မီးယပ်ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို ခံစားကြရသည်။ အမျိုးသမီးအများစု ခံစားရတတ်သော မီးယပ်သွေးဆုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရပါလျှင် သွေးဆုံးချိန်နီးသည့် အချိန် ကြားကာလမျိုးတွင် ရောဂါ၏ မာယာက စတင်တတ်လေသည်။ ချမ်းလိုက်၊ …ပူလိုက်ဖြစ်၏။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊နှလုံးတုန်၊ မောပန်းခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ … Read more
“စာသင်ကျောင်း မလိုချင်တဲ့ ရွာကလေး နဲ့ကျောင်းဆရာတွေ ငိုခဲ့ရတဲ့ ရွာကလေး”
ဒီပုံမြင်တော့ ဒီရွာကို စာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့ သွားစည်းရုံစဉ်က အဖြစ်ပျက်ကို သွားသတိရမိတယ်။ တစ်ရွာလုံးမှာမှ စာသင်ကျောင်းလိုချင်တာဆိုလို့ ရွာသူကြီးပဲရှိတယ်။ ကျန်တဲ့ရွာသားတွေက စာသင်ကျောင်းမှာ ကလေးတွေ စာသင်တာဟာ အပိုအလုပ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ အချိန်မရှိတာနဲ့ ရွာသူကြီးကို မရမကစည်းရုံပြီး စာသင်ကျောင်းဖွင့်ဖို့ပြောတယ်။ မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံးး ရွာသူကြီးကလည်း စည်းရုံပေးမယ်ပြောလိုက်ရရှာတယ်။ ဆိုတော့ အဲရွာမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းဆရာ ၂ဦးချထားပေးခဲ့တယ်။ လားရှိုးကိုလည်း ပြန်ရောက်တော့ မကြာသေးး ကျောင်းဆရာ၂ယောက်က ဖုန်းဆက်လာတယ်။ရွာမှာ ထမင်းမငတ်ပေမယ့် စားစရာဟင်းငတ်နေကြောင်း ဟင်းတွေကို ရွာသားတွေဆီတောင်းပေမယ့် လာမပေးကြောင်း။ ဆီတောင်းသော်လည်း နည်းနည်းပဲပေးတာကြောင့် ဆီတောင် သုံးစရာ မရှိကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ (၁)ပတ်လောက်အထိ ဆိုင်ကနေ အကျွေးယူထားတဲ့ ဆီသွတ်ဗူးနဲ့သာ ထမင်းကိုအောင့်အီ စားနေရကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ကျောင်းတက်တဲ့ ကလေး … Read more
မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ၄င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
သိထားသင့်သည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ၄င်းတို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်ဟု ဆိုသော်လည်း လောကနိယာမ သဘောအရ အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ အမြဲဒွန်တွဲလျက် ရှိနေကြစမြဲပါ။ တချို့သစ်ပင်တွေမှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အားသာချက်တွေ တော်တော်များများ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ချင်း မတူညီကြတာကြောင့် ၎င်းအပင်တွေရဲ့ ဆေးဝါးများဟာ ကိုယ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးသားစနစ်နဲ့ အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်စေတတ်တာကြောင့် သတိပြုသုံးစွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့ပါ၍ သတ်မှတ်ဖော်ညွှန်းထားသော ပမာဏထက်ပို၍ မမှီဝဲမသုံးစွဲသင့်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း အသိပေး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် (က) ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်၏ ဂျယ်လီ (အနှစ်) ထဲတွင် ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တစ်မျိုးက အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်များကို အလိုလိပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် မီးလောင်နာ၊ အရေကြည်ဖုနာ၊ ထိခိုက်ရှနာ၊ နေလောင်ဒဏ်ရာတို့ကို ကောင်းစွာကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ခွဲစိတ်အနာ ချုပ်ရိုးများ … Read more